आकस्मिक गर्भ निरोधक चक्कीको जथाभावी प्रयोगले निम्त्याउन सक्छ यी स्वास्थ्य समस्या आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीलाई आकस्मिक रुपमा मात्र प्रयोग गर्न उनको सुझाव छ। असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि बच्चा बस्न नदिन ७२ घण्टाभित्र खाएपनि यो पूर्ण रुपमा विश्वसनीय नभएको उनी बताउँछिन्। शनिबार, वैशाख २४, २०७९
सन्तान जन्माउने सही उमेर कुन हो? सन्तान जन्माउने सही उमेर कुन हो? ढिलो सन्तान जन्माउँदा कस्तो समस्या आउन सक्छ? लगायत विषयमा हामीले स्त्री रोग तथा आइभीएफ विशेषज्ञ डा नुतन शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। शनिबार, वैशाख ३, २०७९
औषधि खरिद गर्दा के कुरामा ध्यान दिने? [भिडियो] औषधिको खरिद गर्दा के कुरामा ध्यान दिने? यसका नकारात्मक असरहरु के के छन्? लगायत विषयमा हामीले औषधि व्यवस्था विभागका फार्मेसी अधिकृत किरण सुन्दर बज्राचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। शनिबार, चैत २६, २०७८
डण्डीफोरपछि छालामा किन दाग बस्छ? उपचार के? (भिडियो) डण्डीफोर भनेको के हो? डण्डीफोर आइसकेपछि किन दाग बस्छ? उपचार के छन्? लगायत विषयमा हामीले वीर अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट छाला रोग विशेषज्ञ डा लैला लामा ताङबेतानीसँग कुराकानी गरेका छौँ। शनिबार, चैत १९, २०७८
जोर्नी खिइने समस्या के हो? कस्तो अवस्थामा जोर्नी प्रत्यारोपण गरिन्छ? खर्च कति लाग्छ? शरीरमा भएका जोर्नीहरु विभिन्न कारणले खिइने अथवा बिग्रिने समस्या हुन सक्छ। खिइएको अथवा बिग्रेको जोर्नी शल्यक्रियामार्फत् कृत्रिम जोर्नी राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। जसलाई जोर्नी प्रत्यारोपण भनिन्छ। शनिबार, चैत १२, २०७८
बालबालिकाहरु किन ढिलो बोल्छन्? अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिने? एक वर्षदेखि केही शब्द र तीन वर्षको उमेरदेखि केही शब्दको वाक्य बोल्न थाल्छन्। तर केही बालबालिकाहरुमा भने ढिला बोल्ने अथवा नबोल्ने समस्या हुन्छ। शनिबार, चैत ५, २०७८
अनुहारको दाग तथा अनावश्यक रौँ हटाउने लेजर के हो? के कुरामा ध्यान दिने? अनुहारको दाग हटाउन तथा अनावश्यक रौँ फाल्न लेजर प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ। सुन्दर देखिन चाहने व्यक्तिका लागि लेजर विधि सहयोगी बनेको छ। आइतबार, फागुन २९, २०७८
के किरा लागेको दाँत फाल्नुपर्छ? उपचार के? (भिडियो) खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग सफा नगर्दा दाँतमा किरा लाग्ने समस्या हुन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यो समस्यालाई दन्त सडन पनि भनिन्छ। शनिबार, फागुन १४, २०७८
किन हुन्छ महिनावारी गडबड? नियमित बनाउन के-के गर्नुपर्छ? समयमै उपचार गरे अनियमित महिनावारीको समस्या ठिक हुन्छ। तर ढिला गरे यसले विभिन्न जटिलता निम्त्याउन सक्छ।परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी सिनियर कन्सल्टेन्ट निसन्तानपन रोग विशेषज्ञ डा ज्वाला थापासँग थप कुराकानी गरेका छौँ। शनिबार, माघ २९, २०७८
नेपालमा कुन क्यान्सरका बिरामी बढी छन्? मुख्य लक्षण के–के हुन्? (भिडियो) क्यान्सर कस्तो खालको रोग हो? क्यान्सरका मुख्य लक्षणहरु के-के हुन्? कति बिरामी उपचारको पहुँचमा छन्? नेपालमा कुन क्यान्सरका बिरामी बढी छन्? क्यान्सर लाग्नै नदिन के गर्ने? लगायतका विषयमा डा मदन पियासँग कुराकानी गरेका छौं। शुक्रबार, माघ २१, २०७८
चिसोमा किन सुन्निन्छन् हात खुट्टाका औँलाहरु? कसरी बच्ने? (भिडियो वार्ता) चिसोमा हात खुट्टाको औँला किन सुन्निन्छन्? यसका घरेलु उपचार के छन्? कसरी बच्ने लगायत विषयमा छाला रोग विशेषज्ञ डा कर्णसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः आइतबार, माघ २, २०७८
पोषणविद मनसालाई प्रश्नः तरुल, चाकु खानुको फाइदाहरु के–के छन्? कसले खानु हुँदैन? (भिडियो) तरुल र सखरखण्डमा पाइने फाइबर, भिटामिन र मिनरल्सले शरीरलाई फाइदा गर्ने पोषणविद् प्राडा मनसा थापा ठकुराठी बताउँछिन्। साथै यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत मद्दत गर्ने उनले बताइन्। शनिबार, माघ १, २०७८
खोप केन्द्रबाटै कोरोना सर्ने डर (भिडियो) खोप कार्ड नहुँदा सार्वजनिक सेवाबाटै बञ्चित हुने भएपछि खोप लगाउन पुग्नेहरुको भीड यहाँ दैनिक बढ्दो छ। सोमबारसम्म अस्पतालको गेट भित्रसम्मै रहेको त्यो भीड बिहीबारसम्म टेकुको सडकसम्मै पुगेको छ। बिहीबार, पुस २९, २०७८
चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि किन जोखिमपूर्ण? कसरी बच्ने? (भिडियो) अत्यधिक चिसोले स्वस्थ मानिसलाई पनि हृदयघात तथा मस्तिष्कघात हुने खतरा रहन्छ। स्टार अस्पतालका मुटु रोग विशेषज्ञ एवं हेड अफ डिपार्टमेन्ट डा आनन्द जिसी चिसो मौसममा निको भइसकेका मुटु रोग बल्झिने खतरा हुने बताउँछन्। शनिबार, पुस १०, २०७८
पोषण विशेषज्ञलाई प्रश्नः तिहारमा कस्तो खानपान गर्ने? खानपानमा ध्यान नदिए अपच हुने, वान्ता हुने, पेट दुख्ने जस्ता समस्या पनि निम्तन सक्छ। यिनै विषयमा रहेर हामीले स्टार अस्पतालकी पोषण विशेषज्ञ चन्द्रमाला अवस्थीसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। शुक्रबार, कात्तिक १९, २०७८
मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीले कस्तो अवस्थामा आँखा जाँच गराउने? डा शाक्यसँग भिडियो वार्ता मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पार्छ? मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिमा आँखामा कस्ता कस्ता रोग तथा समस्या देखिने सम्भावना रहन्छ? मधुमेह भएका बिरामीले समयमा आँखा परीक्षण नगर्दा कस्तो जोखिम बढ्छ? शनिबार, कात्तिक १३, २०७८
कस्ता महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम? कुन उमेरमा परीक्षण गर्ने? [भिडियो] आफू वा परिवारका कुनै सदस्यलाई स्तन क्यान्सर भएको आशंका छ भने तुरुन्त अस्पतालमा पुगेर परीक्षण गराउनुपर्छ। यदी सुरुकै अवस्थामा स्तन क्यान्सर पत्ता लागेर उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ। बुधबार, कात्तिक ३, २०७८
डिम्बाशयमा क्यान्सर किन हुन्छ? कुन उमेरका महिला बढी जोखिममा? (भिडियो) डिम्बाशयको क्यान्सरमा सुरुवाती अवस्थामा लक्षण नदेखिन सक्छ। त्यसैले डिम्बाशयको क्यान्सरलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भन्ने गर्छौं। मंगलबार, कात्तिक २, २०७८
मिर्गौलाका बिरामीले दसैंमा कस्तो खानपान गर्ने?– डा रबिन नेपाली (भिडियो) मिर्गौलाको रोग अनुसार बिरामीले आफ्नो खानपान र मात्रा तय गर्नुपर्छ। धेरै प्रोटिन भएका खानेकुराले मिर्गौलामा थप समस्या ल्याउने मिर्गौला रोग तथा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा रबिन नेपालीले बताए। बुधबार, असोज २७, २०७८
कलेजोका बिरामीहरुले दसैँमा कस्तो खानपान गर्ने?– डा दिलीप शर्मा (भिडियो) कलेजोका बिरामी र दसैँसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कलेजो रोग विशेषज्ञ डा दिलीप शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः मंगलबार, असोज २६, २०७८
दसैँमा मधुमेह र थाइराइडका बिरामीले खानपानमा किन ध्यान दिने?– डा सुनिल पोख्रेल [भिडियो] दसैँमा मधुमेह तथा थाइराइडका बिरामीले कस्तो खानपान गर्ने? खानपानमा ध्यान दिन किन जरुरी छ? लगायत विषयमा डा सुनिल पोख्रेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। सोमबार, असोज २५, २०७८
छाला सम्बन्धी सबै किसिमको उपचार सेवा द स्कीन क्लिनीकमा (भिडियो) बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म क्लिनीकमा सेवा लिन सकिने कर्मचारी मिना केसीले बताइन्। स्कीन केयरका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमको औषधि तथा क्रिमहरु पनि उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिइन्। शनिबार, असोज १६, २०७८
बढ्दै माइग्रेनको समस्या, कसरी बच्ने? माइग्रेन सबै उमेरका व्यक्तिलाई हुन सक्छ। तर युवा र महिलालाई यो समस्याले बढी सताउँछ। त्यसमा पनि मोटोपन भएको, गर्भनिरोधक चक्की खाइरहने महिला र तनाव धेरै लिने मानिसलाई माइग्रेन हुने गरेको सिनियर कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिस्ट डा पारस रायमाझी बताउँछन्। शनिबार, असोज ९, २०७८
एक महिनामा कति तौल घटाउने? (भिडियो) पोषणविद् प्रा डा मनसा थापा ठकुराठी भने यी डाइटहरु सबैका लागि उपयुक्त नहुने बताउँछिन्। तौल घटाउन आफूखुसी गरिने विभिन्न किसिमको डाइटले शरीरलाई फाइदा गर्नुको साटो बेफाइदा गर्ने उनको भनाइ छ। शनिबार, असोज २, २०७८
डा शेरबहादुर पुनलाई स्क्रब टाइफस सम्बन्धी ९ प्रश्न (भिडियो) मुसामा लाग्ने किर्नाजस्तो किराले टोक्दा यसको संक्रमण हुन्छ। विशेषगरी कृषक समूह यसको जोखिममा पर्छन्। ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, आँखा रातो हुनु लगायत यसको लक्षण हुन्। यो एक प्रकारको ब्याक्टेरियल संक्रमण हो। बिहीबार, भदौ ३१, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेललाई प्रश्न: निपाह भाइरस के हो? कसरी जोगिने? यो अलिकति प्राणघातक छ, यसको मृत्युदर उच्च छ। तर, यो यत्तिकै आउँदैन, यो संक्रमित पशुपंक्षीबाट मानवमा आउने हुनाले पशुपंक्षीले जुठो पारेका खोपेर छोडेका फलफूलहरु असावधानीवश पनि हामी नखाऔँ। बुधबार, भदौ ३०, २०७८
डा अरुणा उप्रेतीलाई प्रश्नः तिजमा कस्ता महिलाले ब्रत बस्नु हुँदैन? ब्रत बस्दा के फाइदा हुन्छ? [भिडियो] तिजको दर र ब्रत धार्मिक विस्वास र महत्वका लागि मात्र होइन महिला स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्। बुधबार, भदौ २३, २०७८